नयाँ शक्तिसँगको एकता प्रक्रिया भंग भएको छैन : हेमराज राई
उपाध्यक्ष, संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
० संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल र नयाँशक्ति पार्टी नेपालबीचको एकता प्रक्रिया भंग भएकै हो ?
— संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नयाँशक्ति पार्टीबीच एकता वार्ताको सुरूवात ठोसरूपमा दुवैतर्फबाट वार्ता समिति गठन गरेरै भइरहेको थियो । गत चैतको अन्तिम हप्ता र बैशाखको पहिलो हप्तासम्म पहिलो चरणमा वार्ता सम्पन्न भयो । त्यतिखेर नीति, कार्यक्रम, सिद्धान्त र संगठनात्मकसँग गाँसिएका विषयहरूमा समान धारणा बनाउने कामहरू भयो । प्राविधिक कुराहरू मिलाउनका लागि हामीले फेरि अर्को चरणमा वार्ता गरिरहेका थियौं । पार्टी एकतासँग गाँसिएका विषयहरूको मूल पक्ष पनि नीति, विचार, कार्यक्रम, नेतृत्व निर्माण र पार्टी पंक्तिहरूलाई समायोजन गर्ने यो एउटा जटिल प्रक्रिया पनि हो । यी कुराहरूमा सहमति भइसकेपछि पार्टी एकताको घोषणा हुने परिस्थिति बन्दै थियो । अहिले आएर नेतृत्व, झण्डा र नामसँग गाँसिएको विषयहरूमा धेरै समानताहरू रहेका छन् । फोरम नेपालको तर्फबाट यस सन्दर्भमा प्रस्तावहरू गएको छ । त्यो प्रस्तावलाई वार्ता समितिमा परिमार्जन गरेर जुन तय गरिएको थियो त्यो उहाँहरूको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकमा कुरा राख्छौं र त्यसपछि खबर गर्छौं भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ । कुरो त्यतिमात्रै हो । तर, सञ्चारमाध्यमहरूमा स्थगित भयो वार्ता, अहिले नहुने भयो भन्ने ढंगले जुन कुराहरू आएका छन् त्यो वास्तावमा हामीसँग गरिएको औपचारिक कुरा पनि होइन ।
० भनेपछि तपाइँहरूसँग अहिले औपचारिकरूपमा एकीकरण हुने वा नहुने केही कुरा भएको छैन ?
— नयाँशक्ति पार्टीको दुई दिनको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकपछि उहाँहरूको खबर आउँछ भनेर हामी प्रतिक्षारत् छौं ।
० नयाँशक्ति पार्टीको बैठक त सकिसकेको छ, केही खबर आएको छ ?
— हाम्रो वार्ता टोलीका संयोजक सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ, उहाँले हामीहरूलाई जानकारी गराउनुभएको छैन । अहिले हाम्रो बैठक बस्दैछ ।
० तर, नयाँशक्ति पार्टीका वार्ताटोली सदस्य रामकुमार शर्माले फोरमसँगको एकीकरण प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगित भएको र माओवादी केन्द्रसँग हुने सम्भावना रहेको प्रष्ट्याउनु भएको छ नि ?
— नयाँशक्ति पार्टीका वार्ता टोली सदस्य रामकुमार शर्माजीले यस्तो कुरा भन्नुभएको छ भने हामीले भन्नु केही छैन । तर, हामीसँग औपचारिकरूपमा गरिएको कुरा यो पनि हो उहाँहरूको बैठकपछि जानकारी गराउने भनेर ।
० भनेपछि, तपाइँहरूलाई जानकारी नै नदिइकन नयाँशक्ति पार्टीले माओवादी केन्द्रसँग एकताका लागि कुरो चलाइरहेको छ ?
— त्यस्तो पनि होइन । पछिल्लोचोटि संविधान निर्माणको प्रक्रियादेखि अहिलेसम्म नेपाली उत्पीडित जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्गहरूको उत्पीडन अन्त्य गर्ने दिशामा संविधान निर्माण हुनुपर्छ, त्यो ढंगले संघीयता हुनुपर्छ भन्ने जुन खालको आन्दोलनहरू चल्यो, ती आन्दोलनहरूलाई बेवास्ता गरी जुन अहिले संविधान जारी भयो त्यसले नेपालको अहिलेको समस्यालाई समाधान गर्न सक्दैन । त्यसो भएको हुनाले एउटा नयाँ वैकल्पिक शक्तिको निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने खालको सोचमा नयाँ शक्ति आएको हो । वैकल्पिक नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने पक्षमा नयाँशक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई र वार्ता समितिका सदस्यहरू विश्वस्त हुनुहुन्छ कि हाम्रो एकताले मात्रै एउटा वैकिल्पक शक्ति निर्माण गर्ने दिशामा देशलाई लानसक्छ । त्यसो भएको हुनाले रामकुमार शर्माजीले भन्नुभएको कुरा गलतै हो भनेर त म भन्न सक्दिँन । तथापि पनि औपचारिकरूपमा हामीलाई त्यस्तो जानकारी आएको छैन ।
० तर, उहाँले रेडियो अन्तर्वार्तामै यस्तो कुरा भन्नुभएको हो नि ?
— ठिक छ, उहाँ एउटा केन्द्रीय नेता हुनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभएको होला । तर, हामीले यसबारे औपचारिक खबर आएको छैन ।
० नेतृत्वकै विषयमा कुरा नमिलेर एकता वार्ता स्थगित भएको हो भन्ने सुनिन्छ नि ?
— म वार्ता समिति सदस्य भएको नाताले वार्ताको छलफलमा कुराकानी हुँदा नेतृत्वमा डा. बाबुराम भट्टराईलाई संयोजक बनाउने र पार्टीको अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई नै बनाउने भन्ने कुरामा सहमति भइसकेको कुरा हो । डा. भट्टराई पार्टीको एउटा सम्मानजक नेताको रूपमा हैसियत दिने र पार्टीको समग्र विकास, एकता, अन्तर्राष्ट्रियस्तर ख्याति, समृद्ध गर्ने सन्दर्भमा मुख्य जिम्मेवारी, पार्टी नीति, विचार, कार्यक्रम, सिद्धान्त, प्रशिक्षण लगायतका विषयहरूमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुने भन्ने सहमति भइसकेको थियो ।
० त्यसो भए, नेतृत्वकै लागि एकता वार्ता स्थगित भएको होइन ?
— वार्ता समितिमा म भएको हुनाले नै यो कुरा मलाई थाहा छ । प्याकेजमा कुराकानी गर्दा उहाँहरूकै प्रस्ताव हो कि संयोजकलाई संयोजकै राखौं र अध्यक्षलाई अध्यक्ष नै राखौं । अध्यक्षजी पार्टीको नेताको रूपमा रहनुहुन्छ र संयोजकजी पार्टीको राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा नेतृत्व गर्नुहुन्छ । त्यसो भएको हुनाले दुईटै नेतालाई सम्मान हुन्छ ।
० कार्यकारीमा समस्या भयो भन्ने सुनिन्छ नि ?
— पार्टी अध्यक्षको रूपमा उहाँहरूलाई राखिसकेपछि कार्यकारी अधिकार पार्टी अध्यक्षलाई नै हुन्छ ।
० त्यसो भए, संयोजकको अधिकार के त ?
— संयोजकको पनि निश्चित अधिकारहरू हुन्छ । उहाँ एउटा राष्ट्रिय नेताको रूपमा, राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पार्टीको समृद्धि र ख्यातिलाई विकास गर्ने सन्दर्भमा । पार्टीका थुप्रै निकायहरू छन् सांगठनिक ढंगले, समानान्तर केन्द्रीय निकायहरू छन् । ती सबैको संयोजनकारी भूमिकामा उहाँ रहनुहुन्थ्यो । पार्टीको संयोजनकारी भूमिका मात्रै होइन, सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम, प्रशिक्षणलाई समेत अगाडि बढाउने अधिकार संयोजकको रहन्छ । पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्ने सन्दर्भमा र अन्य देशका राजनीतिक दलहरूसँग पार्टीको सम्बन्ध विस्तार गर्ने सन्दर्भमा डा. बाबुराम भट्टराई जो संयोजक रहनुहुन्छ त्यो खालको अधिकार रहन्छ ।
० त्यो अधिकार त संयोजकलाई भयो, तर अध्यक्षलाई के अधिकार रहन्छ ?
— पार्टीको संगठनात्मक नेताको रूपमा, दैनिक कार्य सम्पन्न गर्ने नेताको रूपमा अध्यक्षको जिम्मेवारी रहन्छ । पार्टीको बैठक सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्षले गर्छन् । पार्टीभित्रका संगठनात्मक कार्यकारी नेताको रूपमा अध्यक्ष र केन्द्रीय संयन्त्र, केन्द्रीय निकाय र राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पार्टीको ख्याति अभिवृद्धि गर्ने सन्दर्भमा संयोजकको भूमिका रहन्छ ।
० तर, यही कुरामा नयाँशक्ति पार्टीका नेताहरूको चित्त बुझेन भन्ने कुरा आइरहेको छ नि ?
— त्यो त नबुझ्न पनि सक्छ । यो एउटा हाम्रो प्रस्ताव मात्र थियो । प्रस्तावको सन्दर्भमा छलफल चलेर यी कुराहरू आयो र उहाँहरूले केन्द्रीय समितिको बैठकमा राख्छौं र निर्णय लिन्छौं भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको थियो ।
० नयाँशक्ति पार्टीले फोरमभन्दा पनि माओवादी केन्द्रलाई बढी प्राथमिकता दिन थालेको देखिन्छ नि ?
— जुन राजनीतिक शक्तिले देशको समस्या समाधान गर्न सक्दैन, अब नयाँ वैकल्पिक शक्ति निर्माण नगरी हुँदैन भन्ने निष्कर्षका साथ माओवादीका एउटा समूह पार्टी छोडेर नयाँशक्ति निर्माण ग¥यो र अहिले आएर फेरि त्यहीं पार्टीमा समाहित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । हरेक राजनीतिक दलहरूभित्र विभिन्न विचारधारा र पृष्ठभूमि बोकेका नेताहरू हुन्छन् । त्यसैले विभिन्न किसिमका चर्चाहरू चल्ने गरेको हुन्छ । त्यसो भएको हुनाले नेतृत्वले नै त्यस्तो खालको निर्णय गरिसकेको होला भन्नेमा म विश्वस्त छैन ।
० नयाँशक्ति र फोरमबीच एकताबारे जनतामा रहेको अन्योलतालाई प्रष्ट पारिदिए हुन्थ्यो नि ?
— यस विषयमा नयाँशक्ति पार्टीको बैठक पनि भएकै हो र हाम्रो बैठक चलिरहेको छ । उहाँहरूले एकता प्रक्रिया भंग गरिसक्नु भएको छ भने प्रष्ट पार्नुहोला र त्यसपछि हामी पनि आफ्नो निर्णय गर्ने नै छौं । म फोरमको वार्ता टोली सदस्य भएको हुनाले मैले नयाँशक्तिका नेताहरूसँग सोध्दा वार्ता भंग गरेकै छैन, हाम्रो वार्ता जारी नै छ भन्ने कुरा भन्नुभएको छ । त्यसैले बाहिर के कुरा आयो, कसरी आयो भन्ने कुरामा नगएर हामीले जुन तहमा कुराकानी राखेका थियौं त्यहीं तहको बारेमा बुझ्नुस् भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ ।
० नयाँशक्ति, फोरम र माओवादीबीचको एकता कतिको सम्भावना छ ?
— हामी माओवादीसँग एकता प्रक्रियाबारे कुरै चलाएका छैनौं । यो सन्दर्भमा फोरमले अहिलेसम्म सोचेको छैन ।
प्रकाशित मिति : २०७४ साल साउन १३ गते शुक्रबार ।